NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် Pix ဗဟို / တောင်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Rhett Mappin ကြိုဆို
Home » သတင်း » ထုတ်လွှင့် Pix ဗဟို / တောင်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Rhett Mappin ကြိုဆို
ထုတ်လွှင့် Pix ဗဟို / တောင်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Rhett Mappin ကြိုဆို
Chelmsford, Mass - ။ မေလ 13, 2019 - အသံလွှင့် Pix ™ယနေ့ Rhett Mappin ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာ, ထိရောက်သောမေလ 1 အဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ပူးပေါင်းထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ သူဟာအရှေ့တောင်နှင့်ဗဟိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဖြစ်ကာရစ်ဘီယံ, မက္ကဆီကို, နှင့်ဗဟိုကနေဒါများအတွက်ရောင်းချမှုကိုကြီးကြပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရောင်းအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးကနည်းပညာနှင့်အမျှ Mappin မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံထက်ပို 30 နှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်။ သူ Abekas ဗီဒီယိုစနစ်များများအတွက် 1989 အတွက်ရောင်းအားသို့ရွေ့လျားဒေသခံတီဗီများအတွက်ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. သူတစ်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် Telestream, Vizrt, သတိပညာရှိများနှင့်အထွတ်အထိပ်စနစ်များနှင့်မကြာသေးမီက ONE CONNXT များအတွက်ရောင်းချမှု၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည်။ Mappin တစ်ခုတက်ကြွအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် SMPTE 1986 ကတည်းက။
"Rhett အတွေ့အကြုံနှစ်နှင့်တောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် key ကိုဖောက်သည်များနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်အတူခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုထောက်ပံ့ပေး," စတိဗ်အဲလစ်, အရောင်းဒါရိုက်တာအသံလွှင့် Pix ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကထုတ်လွှင့် Pix အသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူ့ကိုရှိသည်ဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုဒေသတွင်ဆက်လက်အရောင်းကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
Mappin သာ. အတ္တလန်တာမြို့ပြဧရိယာများထဲကအခြေခံသည်။ 404-861-9796 မှာသို့မဟုတ်မှာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်သူ့ကိုဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလျ protected].
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့် Pix ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor InfoComm ထုတ်လုပ်မှု switcher SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုကိုခလုတ်	2019-05-13
ယခင်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အန်ဒီ Birkinshaw အတူ Calrec ကိုထပ်တိုးအရောင်းရောကျ
နောက်တစ်ခု: Transvideo: Cine ဂီယာ 2019 မှာနောက်ဆုံးရနှင့်ဦးဆောင်မော်နီတာထုတ်ကုန်